दलान नेपाल : वार्तामा यत्रो झमेला किन ?
शुक्रवार नयां प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई लेखेको पत्रको व्योहोराले समेत उक्त कुरालाई स्पष्ट पारीरहेको मोर्चाका नेताहरु बताउछन । मोर्चाका एक वार्ता टोली सदस्य भन्छन, प्रधानमन्त्री ओलीको वार्ता आवहान पत्रमा जारी आन्दोलनका कारण मुलुकमा अस्थिरता फैलिदै गएको, जनजीवन प्रभावीत हुदै गएको र नागरिकहरुमा आक्रोश देखिन थालेका कारण सरकारको जारी आन्द्योलन प्रति ध्यानाकर्षण भएकाले आन्द्योलनरत पक्षहरुलाई आन्द्योलन स्थगीत गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको वार्ता पत्रको वारेमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरु छलफल गरीरहेका छन । हाल काठमाडौमा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मात्रै छन । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मधेश मै छन भने तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव दिल्लीमा छन । मोर्चा स्रोत भन्छन, तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर सवै पक्षहरु संग सम्पर्क गरेर मोर्चाको बैठक नै डाक्न खोजीरहेका छन । प्रधानमन्त्रीको पत्रमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नाउमा आएको र वोधार्थको रुपमा चार ओटै अध्यक्षहरुको नाममा सम्बोधन गरिएको छ ।
यत्रो झमेला किन ?
जारी आन्दोलनको एक महिना नाघि सक्दा सम्म त सता पक्षले वार्ताको लागी खासै चासो देखाएनन । त्यस पछि खास गरी भारतीय पक्षवाट आएको दवावलाई सामसुम पार्न सता पक्षले केहि वार्ताका लागी देखावटी कामहरु गरेका थिए । तर पनि वार्ताको टे्वलमा मुद्धाको वारे प्रमुख दलहरु खासै गम्भिर देखिएनन । मोर्चाका तर्फवाट प्रमुख दलहरु संग साइड टकहरुमा सहभागी नेताहरु भन्छन, अहिले पनि सता पक्ष र अर्थात प्रमुख दलहरु आन्दोलनलाई रणनितीक रुपमै तुहाउन खाजीरहेको देखिन्छ । त्यसका लागी उनीहरुले वाहिर देखावटी रुपमा वार्ताको आब्हान गरीराख्ने तर वार्ताका लागी ठोस कुनै कदमहरु चालीरहेको छैन । ती स्रोतको बुझाईमा सतापक्ष रणनितीक रुपमा आन्द्योलन अझै केहि लम्बिए जनता नै आन्द्योलनरत पक्षहरु प्रति आक्रो्शित भएर प्रतिकारमा उत्रन सक्छ भन्ने आकंलनमा छ, दोस्रो उनी सता खेल परिवर्तन संग केहि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई फुटाउन सक्ने र सताको लोभमा केहिलाई फसाउन सके आन्द्योलन वदनाम हुन सक्ने दाउमा छन, तेस्रो सतापक्षहरु दिल्लीसंग आफनो नयां सहज व्यवस्थापनको खोजीमा छन र त्यस पछि मात्रै मधेशीहरु संग वार्ता गरे आन्दोलनरत पक्षहरुलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
स्रोत भन्छन, एक पछि अर्को गरी सतापक्षका नेताहरु याहा वार्ता गर्नको सटा दिल्ली गईरहेका छन, यसले उनीहरु पहिला के खोजीरहेका छन भन्ने त्यो प्रष्ट रहेको देखिन्छ । त्यसैले होला कतिपय मधेश राजनितीका भित्रियाहरु भन्छन, जारी आन्द्योलनको व्यवस्थापन अझै केहि पर जान सक्छन । उनीहरुको बुझाई आन्दोलनको उचाईलाई यथावत राख्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा वार्ता प्रक्रिया थप कमजोर हुन सक्छ ।